Afhayeenka Golaha Shacabka oo ka qeyb galay dhaarinta Garyaqaan Baashe Yuusuf – Kalfadhi
Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan,guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qeyb galay xaflada dhaarinta ee guddoomiyaha maxkamadda Sare garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed .
Munaasabada lagu dhaariyay guddoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada ee caasimada Muqdisho.
Guddoomiyaha guddiga dastuurka ee golaha shacabka xildhibaan Abuukate Shariif sheekh Maye ayaa dhaariyay guddoomiye Baashe.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa dhawaan guddoomiye Baashe u magacaabay guddoomiyaha Maxkmadda Sare ee dalka.
Xildhibaan hore oo ka hadlay mas'uuliyadda saaran xildhibaannada qaranka